नेपाल आज | सावित्री सुवेदी र १ हजार महिलासँग यौन सम्पर्क गरेका मदन राईको डेढ घण्टे ‘यौन सवाल–जवाफ’
‘वलात्कारीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ’ भन्दै विद्रोह गर्दै आएकी महिला अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी र १ हजार महिलासँग यौन सम्पर्क राखेको दावी गर्दै आएका कृषी वैज्ञानिक मदन राईका विचमा यौन सम्पर्ककै विषयमा करिव डेढ घण्टा सवाल–जवाफ भएको छ।
‘म नाङ्गै हिडेपनि मलाई बलात्कार गर्ने कसैलाई अधिकार छैन’ भन्ने सुवेदी र राईका विचमा सवाल–जवाफको वातावरण ‘नेपाल आज’ ले मिलाएको हो । राईले सुवेदीले उठाउँदै आएको ‘वलात्कारीलाई झुन्ड्याउनु पर्ने’ विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । वलात्कार भन्ने कुरा प्राकृतिक भएको र यसलाई गलत मान्ने भन्दा पनि शिक्षाका माद्यमवाट घटाउँदै जानु पर्ने उनको तर्क छ।
राईले वलात्कार भन्ने कुरा प्राकृतिक र डिस्चार्ज हुने चाहना मात्रै भएको वताए । ‘मानौं म र तपाई (छोरी) सँगै छौं । मेरो स्ट्रोजेन हर्मोन चार्ज भयो भने मैले तपाईलाई छोरी भनेर देख्दै देख्दिन। तपाई मेरो डिस्चार्ज गर्ने अंग मात्रै देख्छु । तपाईको योनी मात्र देख्छु। आकर्षण गर्ने स्तन, आँखा वा अन्य कुराहरु देख्छु । त्यसपछि मैले छोरी, दिदीवहिनी र आमा पनि विर्सन्छु’ उनी भन्छन्–‘चार्ज भएपछि मान्छेको आँखा वन्द हुन्छ। त्यो हर्मोनको ओभर एक्सन हो । डिस्चार्ज भएपछि मात्रै छेयाङग हुन्छ। ’
चार्ज भयो भने के गर्ने भनेर सन्सारमा अनेक उपाय भएको वताएका उनले नारी र पुरुष वरावर संख्यामा जन्मेकाले आवश्यक्ता र इच्छाका आधारमा आपसी ब्यवहार गर्नु पर्ने धारणा राखे। ‘यो संसारमा महिला र पुरुष वरावर संख्यामा जन्मेका छन् । १० देखि ५० वर्षको उमेर चै यौनयोग्य छ। खोज्यो भने प्राप्त हुन्छ’ उनले थपे–‘तर, एक पटकमा एक जना । वहु पुरुष वहु महिला हुनु हुँदैन। एक पटकमा एकजनासँग सेक्स गर्नु पर्छ । सेक्स भनेकै प्रेम हो, प्रेम भनेकै सेक्स हो । वलात्कार मान्छेले चाहेर गर्ने होईन।’
शुकरातका चारवटा विरोधाभाष कुराहरुलाई उल्लेख गर्दै उनले भने–‘जन्मले कोही पनि खराव÷नराम्रो हुँदैन। जानीजानी कसैले गल्ति गर्दैगर्दैन। ज्ञानले नै असलगुणी/सदगुणी मान्छे जन्माउँछ र सदगुण नै आनन्दको मुहान हो ।’
‘तपाई हजार जनासँग यौन सम्पर्क गरें भन्नुहुन्छ। तर, मैले एउटा ब्वाईफ्रेन्डसँग व्रेकअप गरेर अर्को ब्याईफ्रेन्ड वनाएँ भन्दा समाजले चरित्रहिनको आरोप लगाउँछ किन ? तपाई र ममा विभेद किन?’ भन्ने सावित्रीको प्रश्नमा राई भन्छन्–‘यहि विभेद अन्त्य गर्न म विगत २५ वर्षदेखि खुलेआमा यौम सम्पर्कका कुरा गर्दै आएको छु । हाम्रो समाज विगत ५ हजार वर्षदेखि सेनाको गोली र धर्मको नियन्त्रणमा छ। हाम्रो समाजमा नारीले सवैभन्दा वढि दुःख गरेको हुन्छ। ९ महिना पेटमा वोकेर पुरुषका सन्तान जन्माएको हुन्छ। ५ वर्ष गुहु–मुत सोहोरेर दुध खुवाएर हुर्काएको हुन्छ। यति धेरै दुःख गरेर पुरुष हुर्काउने नारीलाई फेरी अनेक खालको हिंसा गरिएको छ। यो गलत छ भनेर म २५ वर्षदेखि लागेको छु ।’
महिलामाथि हुने हिन्सालाई रोक्न लोकतन्त्र वढाउदै जानपर्ने उनी वताउँछन्। लोकतन्त्र भनेको नाङ्गो शासन हो। शासकले के गर्दैछ भनेर लोकले थाहा पाउनु पर्छ भन्नु नै लोकतन्त्र हो । यसको मतलव आकर्षण भयो भन्दैमा दुरुपयोग गर्न भएन। भोक लाग्यो भन्दैमा ग्वाम्–ग्वाम् १० किलो भात खाने कुरा त भएन । दुध पायो भने दुई गिलास पो खान पर्ला । ५ गिलास खायो भने त छेरेर मर्छ । तिर्खा लागेको छ भनेर गड्गड् ५ लिटर पानी पियो भने त वाटर डिजिज लागेर मर्छ । त्यसै गरी नारीको स्तन देखेंभने अथवा योनी देखें भने मलाई भोक लाग्यो। इच्छा लाग्यो। तर, यौनको भोक लाग्यो भन्दैमा अर्काको स्तन र योनीलाई मैले जवरजस्ती गर्न मिल्छ? त्यो हिन्सा होनी । यो सवै कुरा शिक्षावाट जान्नु पर्छ।
उनी अगाडि भन्छन्–मैले जतिपनि कुरा गरें महिलाकै/नारीकै निमत्त। नारीले सम्मान पाउनु पर्छ। हरेक परिवारको मुली/निर्णायक चै आमा हुनपर्छ । शौभाग्यवस मैले दुईटा विवाह गरे। कति गर्थे होला तर पछि पत्ता लगाएँ की सवै नारी एउटै हो । चाहे हजार गर, चाहे एउटा गर। वानी वेहोरा त एउटै हो । सम्भोग भयाो तर श्रीमतीहरुसँग म सँगै वस्न सकिँन । आफनो कामको सिलसिलमा घुमिरहँदा यौन चाहना भयाो साथीसँग कुरा मिल्यो। फेरी मैले पैसा तिरेर वेस्यावृत्ति गरेको छैन। पैसा पनि तिरेको छैन। वलात्कार पनि गरेको छैन । संयोगले ७० वर्षमा घुम्दा घुम्दा यो सवै भयो।
नारी हिन्सा ५ हजारवर्षदेखि चलिआएको छ। अव लोकतन्त्र आयो, दुईटा मात्र राजा वाँकी छन् । युरोप अमेरिकामा त नारीको अधिकारका लागि ठुला ठुला क्रान्ति भए। नेपालमा पनि तपाईलाई देखें, खुसी लाग्यो । आमा शिक्षा तथा महिला हिन्सा अन्त्यका लागि मैले स्कुलै खोल्या छु खोटाङ्गमा । अहिले ५२ जिल्लाका २ सय विद्यार्थी छन् । १२५ जातीका मान्छे पढाउने हाम्रो योजना छ। जात–धर्म केही हुन भएन । नारीलाई निर्णायक भुमिकामा राख्नु पर्छ । दुःख धेरै गरेका हुन्छन। मानवको पीडादेखि समाजको पीडा वुझने वढि सम्वेदनशिलता नारीमा हुने भएकाले पनि उनीहरु निर्णायक हुनुपर्छ। शान्तीको प्रतिक पनि नारी होनी। पुरुषले लडाई गर्छ, लडाई गरेर त अव काम छैन। लडाई हिजो गर्यो होला, मान्छे कै मासु खायो होला। अवको आधुनिक युगमा त लडाई होईन, शान्ति चाहान्छ। हिजो २० जना छोराछोरी जन्माउँदा २ जना वाँच्थे। अव त्यस्तो छैन। जिवन र जगत (विज्ञान)को अध्ययन गर्दै जाँदा यती कुरा पत्ता लाग्यो की अव धेरै छोराछोरी पाउनै पर्दैन। इच्छा लागेन भने नपाउँदा पनि हुने रछ।
म त उहिलैदेखि विवाह गर्नु पर्दैन भन्छु । उहिले राजाहरुको नपुंसक छोरा थियो होला। अथवा सेक्सुअल्ली कमजोर थियो होला। उसलाई जवरजस्ति वुहारी भिडाई दिने । यसमा धेरै कुरा छन् । तर, मैले देखेको चै नारी नै मानव समाजको सव थोक हो भन्छु । नारीलाई वढी जिम्मेवारी दियो भने त्यो घरमा खुसी र शान्ती हुन्छ। सुख र शान्तीवाटै त होनी खुसी हुने । आधुनिक र वैज्ञानिक युगमा आमा/नारीलाई चै अलिकती वढी अधिकार दिएर समाजलाई चै खुसीमय वनाउनु पर्छ ।
‘समाजमा जसरी तपाई यौनको विषयमा खुलेर वोल्नु हुन्छ नी। मैले एकभन्दा वढिसँग सेक्स गरेको छु । एकजना मानिससँग एक चोटी सेक्स गरेपछि अर्कोचोटी गर्न हुँदैन। जुन तपाईले भनिरहुन भएको छ। त्यहि कुरा मैले गरें भने यो समाजले त मलाई स्विकार्दैननी त’ भन्ने सावित्रिको जिज्ञासामा राईले थपे– समाजले स्विकारेन भने के गर्छ। मृत्युदण्ड दिन सक्दैन। इस्लामिक धर्ममा चै ढुंगा हानेर मार्ने भन्छन। तर नेपालमा त्यो छैन, गैरकानुनी हुन्छ। हामी भाग्यमानी हौ, मृत्युदण्ड दिने चलन छैन। तपाई धेरै जना पुरुषसँग प्रेम/सेक्स गर्नु हुन्छ। तपाईले अरुको अधिकार हनन् गर्नु भएको छैननी । अरुलाई हानी गरेको छैन नी। म तलाईलाई वलात्कार गर्छु भनेको छ र ? तपाई मलाई मन पर्यो, म तपाईसँग प्रेम गुर्छ, तपाईसँग यौन सम्पर्क गर्छु भन्नु अवराध हो र ? उसले मान्यो भने गर्ने हो, मानेन भने वलात्कार हो । आफनोमात्र होईनकी दुईटा आत्माको इच्छा पुरा गरेर परम आनन्द प्राप्त गर्नु भनेको धर्म हो । तर, हाम्रो समाजमा के छ भने अर्काको देखिनसहने क्या। आफु पनि नगर्ने अर्कालाई पनि गर्लास... भन्ने । त्यो ईस्र्याको प्रतिक हो । तपाई खुसी भएको देख्न नसक्नु ईस्र्या हो नी। त्यो भनेको अज्ञानताको उपज हो । अरुको आनन्द देख्न नसक्नु नै अहिले समाजको सवैभन्दा ठुलो अपराध हो। अपराधी समाजलाई सुधार गर्नु तपाई म जस्ता मान्छेर जन्मेरै सम्भव छ। संसार वदलेको त एकदुई जनामान्छे वाटै त होनी । आजसम्मको सन्सार त कति हो कति क्रान्ति पनि भएको छ नी। नेपालमा पनि माओवादीले युद्ध सुरु गरेर १७ हजार मान्छे मर्नु पर्यो । अव फेरी पनि त्यस्तो भयो भने त १७ लाखै मर्लान । संसारमा २० करोड मान्छे मर्या छ लडाईमा ।
युद्ध दुई कारणले हुन्छ। एउटा त अहंकारको प्रदर्शनले युद्ध हुन्छ, अर्को विकृतिको विरुद्ध पनि युद्ध हुन्छ। तपाईले खेपेको पिडा अहिले वोलीमा मात्रै होला। आईमाई भएर यस्तो कुरा भन्छेस भन्नु स्वभाविक हो । वावुआमाले जे जान्यो, समाजले त्यही जान्दछ। समाजले जे जानेको छ, आमावावुले जे जानकेको छ सन्तानलाई त्यहि सिकाउँछ। सन्ताननले जे सिक्यो त्यही गर्ने हो। ५ हजार वर्षदेखी त्यही गलत गर्दै आएको हो नी। आईमाईले केही गर्नै हुँदैन, सवै छोपेर राख्ने हो। पुरुषले खोल भनेका वेला खोल्ने हो अरुवेला छोपेर राख्न कही सम्भव छ ? त्यो पुरुष जस्ले मनपरी गर्दैछ, त्यसलाई जन्माएको त आमाले होनी। त्यसैले दवाएर राख्ने भनेको त आमाको गल्ति हो । संसारमा अहिलेको समस्या पुरुष होईन, महिला हो। वाउ होईन, आमा हो ।
महिलाले चाह्यो भने एक मिनेटमा सवैथोक हुन्छ तर मैले चाहेर जिन्दगीभरी पनि हुदैन । महिलाले चाहेन भने मैले कहाँवाट पाउँछु । त्यसैले आमाहरुले विद्रोह गरे भने पुरुपको केहि पनि चल्दैन। अतिचार भएपछि मार्नु पर्यो । कतिलाई मारेर सक्छ। चाहन्छि आमा, यौन सम्पर्क गर्नलाई चाहिन्छ नारी। त्यस कारण अहिलेको समस्या भनेको आमा/नारी हो । सावित्री (तपाई) ले भनेका कुरा थोरै हो। अझै वृहत वनाउनुपर्छ ।
मत भन्छु कुनै वेला पर्यो भने १० हजार आमाहरु सडकमा नाङ्गै आउनुपर्छ । मत मेरो स्कुलमा नाङ्गै पढाउँछु। मेरा तरुनी छोरीहरुलाई, नातिनीहरुलाई सेक्स एजुकेशन दिन्छु । तिमीहरुको समस्या यही हो भनेर। मलाई हेर, म एक हजारसँग सम्पर्क गरेको मान्छे हो भन्छु। तिमीलाई सम्पर्क गर्न मन लाग्दैन अर्को कुरा हो, तर कसरी सम्पर्क गर्दा कस्तो हुन्छ र कहाँनेरी विकृती आउँछ भनेर वुझ भनेर म आफै नाङ्गै भएर सेक्स एजुकेसन सिकाउँछु । त्यो नभईकन त भयंकर गुम्सिन्छनी। जिज्ञासा भएर विस्फोट हुन्छ। त्यसलाई मेटाउनुपर्छ। १० हजार आमाहरुले दुध र योनी देखाएर नयाँ सडकमा हिडौंत, कस्ले के गर्छ ? १० हजार आमा मार्न सकिन्छ ? तर, हिम्मत गर्नु पर्यो नी।
चीन र नेपाल–भारतमा हेरौं त। चीनमा महिला पुरुष वरावर छन्। चीनको अर्थतन्त्र १० गुणा अगाडि छ। तर, भारत भर्खर छ। चीनमा नारीलाई वरावर अधिकार छ। यहाँ चै ‘चुप्’ भनेर दवाएर राख्छन। भारत र नेपालमा जवसम्म महिलालाई हिंसामा राख्ने र छोपेर राख्ने गरिन्छ तवसम्म देश वन्दैन। वरावर काम गर्नु पर्यो नी। महिलालाई घर वाहिर निकाल्नु पर्यो नी । भात पकाउनु त उत्पादन हैन।
अपवादमा गाउँमा महिलाहरु १८ घण्टा खट्छन, पुरुषहरु जुवा खेलेर वस्छन् । तर, त्यो अनुत्पादक छ। मैले १ हजारसँग सम्पर्क नगरेको भए मलाई यो ज्ञान प्राप्त हुँदैनथ्यो ।
यौनका मामलामा वुद्ध पनि गलत भएको राईको दावी छ। उनले यौनसम्पर्कलाई यौन दुराचार भनेर गल्ति गरेको वताए । ‘यौन दुराचार भनेको हुँदै होईन। सवै दुराचार भनेको खराव कुरा हो । दुध, पानी हावा पनि खराव कुरा हो। दुधले मान्छे मार्छ, वचाउँछ पनि। हावाले मान्छे मार्छ अनि हावा विना मान्छे वाँच्दैन। पानीले पनि मान्छे मार्छ तर पानी विना मान्छे वाँच्दैन। त्यसैले वुद्धमा पनि तत्वज्ञान थिएन। यौनलाई दुराचार भन्न मिल्दैन। यौटा मात्रै दुराचार, एउटा मात्र कुरा खराव हुँदैन। वुद्धको पालामा त्यो कुरा भएको थिएन र वहाँले भन्नु भो गलत कर्म भनेर। सायद कसरी वुझाईयो, नभनेको कुरा पनि हुन्छ। तर, भनेको हो भने गल्ति पनि हो । त्यसैले अहिले आधुनिक युगमा वुद्धको कुरा सुनेर मात्र हुँदैन।
‘जव पुरुषमा यौन चाहना आउँछ, उस्ले श्रीमतीसँग सेक्स प्रस्ताव राख्छ। मेरो श्रीमती सेक्सको लागि तयार छ की छैन, उ वाहिर कसैसँग सेक्स गरेर आएको छ की, उ महिनावारी भएको छ की, विरामी छ की भनेर पुरुषले कहिलै पनि सोच्दैन। मात्र यो श्रीमती हो, तँसग मैले सुत्न पाउनुपर्छ भनेर चै पुरुषले दमन गर्छ । महिला चै कस्तो वाध्य हुन्छ भन्दा, समाजका लागि परिवारका लागि अथावा श्रीमानले भन्दा मैले सम्वन्ध राखिन भने परस्त्रिसँग सम्वन्ध राख्ने होकी ? यहि सम्वधन्ले गर्दा मेरो परिवार टुट्ने होकी ? भन्ने डरले महिलाहरुले इच्छा विपरित सम्वन्ध राखेका छन् । यो वलात्कार होईन ? उनीहरुलाई नाई भन्ने अधिकार छैन’ भन्ने सावित्रीको प्रश्नमा यो कुरा पनि आमासँगै जोडिने राईले वताए ।
५ वर्षको उमेरसम्म वच्चाले आमासँग धेरै कुरा सिक्छ। उसले आमासँग एक घण्टामा ४ सयवटा प्रश्न गर्छ। आमा अज्ञानी भयो भने उसले उत्तर दिन सक्दैन। झर्को मान्छे। ५ वर्षसम्म सोधेको प्रश्नको उत्तर नआएपछि उ विद्रोह गर्छ । उसले यिनीहरुलाई केही आउँदैन भन्छ र टाढाटाढा हुन्छ। तर, सानै देखि आमाले नारी पुरुष समान हो भनेर काममा पनि समान ब्यवहार गर्ने हो भने त्यो अवस्था आउँदैन। त्यसैले आमा मुल जिम्मेवार हो। जव १० वर्षभन्दा माथि लाग्छ, यौन चाहाना हुन्छ। त्यो वेला पनि उसलाई सहि शिक्षाको आवश्यक्ता पर्छ । यदि त्यो शिक्षा पायो भने महिला/पुरुष कसैले जवरजस्ति गर्दैन । मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि प्रश्ताव गरेको छैन। महिलाहरुले नै प्रश्ताव राखेर यौन सम्पर्क भएको छ।
यौन ब्यवहारमा सवै कुरा मिलेन भने भयंकर कुन्ठा हुन्छ, हाम्रो समाजमा त्यो छ। मागी विवाहमा धेरै समस्या छ। लिङ्ग र यौनीको साईजमा, सेक्सको तरिकामा, विचारमा र मन मिल्ने/नमिल्ने कुरामा भिन्नता छ। त्यसैले विवाह गर्नु हुँदैन, गर्नै पर्छ भने ५ वर्ष सँगै सुतेपछि मात्र ठिक लाग्छ भने अनि विवाह गर्ने हो । लिङ्ग र योनीको साईज मिल्छकी मिल्दैन, त्यसपछि मन मिल्छ की मिल्दैन। मन मिल्छकी मिल्दैन । त्यो कुरा विचार गरेर मात्र विवाह गर भन्छु म। मेरो स्कुलमा दिने शिक्षा नै यहि नै हो ।
संसारमा प्रेम भन्नु कुरा नै नभएको राईको दावी छ। ‘मान्छे स्वार्थी प्राणी हो। प्रेम छैन मान्छेमा। प्रेम हुँदैन, स्वार्थ हुन्छ। प्रेम भनेको महिलाको एस्ट्रोजेन र पुरुषको टेस्टोस्टेरोन विचको आकर्षण हो। त्यो आकर्षण भएन भने प्रेम हुँदैन, सेक्सको डिजायर भएन भने प्रेम हुँदैन। त्यसैले प्रेम हुँदै हुँदैन। नत्र भने सवैसँग प्रेम गर्नु पर्ने नी। अर्को भनेको पैसा वा भौतीक लेनदेनमा पनि हुन्छ प्रेम(स्वार्थ) । कुनै पनि वस्तु पाएँ भने म उसलाई प्रेम गर्छु, पाईन भने हेट गर्छु। आमा वावुले गर्ने पनि प्रेम होईन। स्वार्थ हो । त्यो सवै भ्रम हो । यो छोराछोरी ठुलो भएर मलाई पाल्छ। मेरो नाक राख्छ। मलाई ठुलो वनाई दिन्छ भनेर नै आमाले पनि प्रेम गर्ने हो । त्यो भन्दा त छदैछैन। स्वार्थ छ क्या।
मैले आमा वुवा र श्रीमतीमा पनि प्रेम देखेको छैन। सवैको प्रेममा स्वार्थ जोडिएको छ। त्यसैले प्रेम भनेको विष हो र स्वर्ग पनि हो । महिलाको कुरामा सवैभन्दा अपराधी धर्म हो । हिन्दु, वुद्ध, क्रिस्चियनलगायतका सवैले धर्म/परम्पराको नाममा नारिलाई अधिनमा राख्ने, दलेर राख्ने, छोपेर राख्ने गरेका छन् ।
महिला अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी र कृषी वैज्ञानिक मदन राईसँगको यौन सम्वन्धि विशेष सवाल–जवाफ हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला।
सावित्री सुवेदी मदन राई वलात्कारीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ १ हजार महिलासँग यौन सम्पर्क